MIYUU DHUUJIN KARAA TOONTA JIILAALKA QABOOJIYAHA IYO SIDA LOO SAMEEYO? - WIXII MARTIDA
Hooyooyinka casriga ah ayaa yimid hal milyan oo siyaabood kaydinta khudaarta jiilaalka.
Sallaar, tusaale ahaan, waxaa lagu kaydiyaa dhalooyinka, sanduuqyada, iyo xabkaha, laakiin toonta la qaboojiyey waxay leedahay nolosha shafka ugu dheer.
Isaga si fiican loo hayo ee qaybta qaboojiyaha ee caadiga ah ee qaboojiyaha iyo ma qaadaan meel aad u badan.
Ma karikar karaa jiilaalka qabowga qaboojiyaha?
Baro maqaalkeena ku saabsan sida loo xafidayo toonta Maqaasi, sida loo badbaadiyo toonta guriga, oo ay ku jirto kaydinta toonta jiilaalka ee guri dabaq ah.
Jimicsiga Sareyska waxaa badanaa loo isticmaalaa xaflado si ay u kaydiso. Habkani wuxuu leeyahay labadaba faa'iido iyo tabaruc. Tusaale ahaan:
toonta waxay xajisaa sifooyinka bakteeriyada;
ilaaliyaa xubno waxtar leh;
lagu kaydiyaa waqti ka badan hab kale;
diyaar u yahay in isla markiiba la isticmaalo.
dhadhanka ma aha mid la mid ah sida kuwa cusub;
ka dib markii barafka uu lumiyo muuqaalkiisa, waa "faafaa".
Faa'iidooyinka iyo xayawaanka ayaa isku dhejin kara, iyada oo natiijada ah in qof kasta oo gurigeeda ahi uu qadarin doono ujeedada Dhirta qoyan. Wax kale ayaa laga yaabaa inay noqoto habka ilaalinta toonta xilliga jiilaalka, sida qalajinta adoo isticmaalaya qalabka guryaha ama hawo nadiif ah.
Dhammaan dadka aan la daaweyn
Waxaan dhigi karayaa toonta gabi ahaanba qaboojiyaha? Habkani waa mid si ku filan loo dabaqay. marar dhif ah.
Garlic ayaa si buuxda u barafoobi karaa, laakiin marka la gooyo waxa ay lumin doontaa qaabkeeda waxayna noqon doontaa ma fududa in la nadiifiyo. Sababtan awgeed, qaabkani ma aha mid lagu talinayo.
Haddii la go'aamiyo in lagu xakameynayo madaxa oo dhan, waxay u baahan yihiin in la duubo bacaha balaastigga ah. Bacahaas waxaa lagu dhejiyaa qaboojiyaha qaboojiyaha ee qaboojiyaha.
Habkani waxa uu doorbidaa midkii hore. Garlic waa barafoobay mar hore la nadiifiyey, ka dib markii ay ka soo bixisay barafeeyaha diyaar u ah isticmaalka ee wax lagu karsado, suugo, iwm.
Fursad wanaagsan oo lagu xakameyn karo toonta. Dharka sarajoogga ee Booqday Furimaha Dagaalka hilibka iyo la qaboojiyo weelasha. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, ka soo saar weelka qaboojiyaha, jarjar xajin leh mindi sida ugu muhimsan. Weelka leh weelka soo haray ayaa dib loo dhigayaa qaboojiyaha.
Ma ogtahay in for barafka toon xataa xitaa jira qalabka gaarka ah? Ku saabsan mid ka mid ah fiidiyowgaan:
Saraq ilaalinta waa inay marka hore diyaariyaan:
goosashada ka dib hogaaminta hawshaby jarida afkoda, nidaamka xididka;
kala saar. Si loo qaboojiyo, waxaad isticmaali kartaa madaxyada toonta ah ee aan ku habooneyn kaydinta cusub. Haddii ay waxyeelladu tahay mid aan muhiim ahayn, waad kala soocmi kartaa maraqa aan la isticmaali karin oo iyaga iska tuur. Tani waa suurtogal, maxaa yeelay dhaarku si dhif ah ayay u barafoobeen, weli waa laga jarayaa;
in la nadiifiyo maraqyada ka soo duulaya;
xoqinhaddii kaydinta loo qorsheeyay qaabka qaboojiyaha la qaboojiyey.
Halkee ka fiican si loo xakameeyo toonta? Wax isbeddel ah ma samaynayso haddii ay toonta la qaboojin doono qaboojiyaha qaboojiyaha ee qaboojiyaha ama qaybta qaboojiyaha ee kala gooni ah. Garlic ma aha mid jilicsan sida basbaas caag ah, tusaale ahaan. Waxna kuma dhici doono isaga xitaa haddii bacaha si adag loogu xiro weelka qaboojiyaha.
Maxay tahay toonta lagu yareeyo guriga? Waxaa fiican inaad qaboojiso toon:
ee caagagga balaastigga ah (gaar ahaan haddii ay tahay tiro toon).
Dhab ahaanba kuwa wax yar ayaa qaban doona. caag ah awoodda. Waxaad dhegi kartaa toonta dufan adigoo duubaya filim xoqan.
Habka loo xakameynayo toonta barafka ee ku jirta fiidiyowga:
Sidee loo xakameynayaa toonta jiilaalka? Maxay yihiin heerkulka kuleylka?
Si loo qaboojiyo khudaar kasta oo loo kaydiyo habkan, heerkul fiican -18 digrii.
Waxaa lagu hayaa qaybta qaboojiyaha qaboojiyaha iyo qaboojiyaha. Heerkulkani, toonta ayaa socon doonta wakhti dheer. ma lumin doonaan guryaha faa'iidooyinka leh waxayna diyaar u tahay inay isla markiiba cunto marka uu baxo.
Ka hor inta aanad qaboojiyaha ku ridin barafeeyaha, waxaad u baahan tahay inaad sameyso tiro talaabo ah:
Geedo toonta: si loo kala saaro xalalka aan habooneyn, dooro cilad.
Cadee toonkana laga soo jarayo.
Ku rid iyaga bacaha balaastigga ahhaddii aad qorsheyneysid inaad xakamayso jajabyo dhan.
Iska xoqaya Booqday Furimaha Dagaalka hilibka iyo isku laab qaybta caagaga caaga ah haddii la go'aamiyo in lagu daro toonta sida mass.
Ku rid boorsooyinka ama weelasha qaboojiyaha.
Wanaagsan in la qaato yar yar weelasha loogu talagalay barafka qashinka iyo yar yar bacaha balaastikada ah ee lagu xakameeyo toon. Waa mid aad u macquul ah. Toontahee qaybo yaryarway ka fududahay isticmaalka.
Faa'iidada ugu weyn qallajinta ka hor inta aan la isticmaalin hababka kale - nolosha shelf. Waxay si weyn u korodhaa oo waa 12 bilood.
Haddii aad dooranayso hababka kale ee kaydinta, had iyo jeer waxaa jira khatarin aanay toonta ku dhicin wakhtigii loogu talagalay, waxay u muuqan doontaa inta lagu jiro xilliga khalkhalka inta lagu jiro xilliga keydinta oo dhan.
Sidaas awgeed, toonta ayaa ku habboon loogu talagalay qaboobaha. Habkani wuxuu suurtogal u yahay inuu badbaadiyo toonta dheermarka loo eego kuwa kale. Dhibaatooyin Habkani wuxuu u doodaa luminta foomka tolka iyo qaabka ka dib markii la jarayo.
Si kastaba ha noqotee, marka qashin lagu daro toon, cilladdaasi ma aha mid khaas ah. Taabashada sunta ayaa badbaadin doonta xitaa noocyada ay yihiin maaha mid ku haboon kaydinta muddada dheer cusub.
On habka lagu yareeyo toonta dhulka iyo xiiro aan la daaweyn, iyo sidoo kale siyaabo kala duwan oo lagu kaydin karo toonta guriga ee fiidiyowgaan: